No. 2091, Friday, March 22, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2091, Friday, March 22, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၂ ရက် (သောကြာ၊ မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၉)
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်တည်ရှိရေး အဓိကရည်မှန်းဟု AA ပြော လက်နက်ကိုင်ပြီး အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမည့်အစား နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းလာရန် AA ကိုဖိတ်ခေါ် အဖြူရောင်နယ် မြေဖြစ်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အခြေချရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်လုံခြုံရေးကို ခြိမ်း ခြောက်စေသဖြင့် အစိုးရဘက်က ထိုက်သင့်သည့်လုံခြုံရေးဆောင် ရွက်ချက်များ လုပ်ဆောင်နေခြင်း ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် လို အပ်ကြောင်း NRPC ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(AA)အပါအ ၀င် NCA မထိုးရသေးသည့် တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် AA ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဟန်အား 7Day Daily သတင်းစာအပါအ၀င် မီဒီယာများက တွေ့ဆုံပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ရေးပဋိပက္ခအခြေအနေ၊ AA အဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေချ နိုင်ရေးဆောင်ရွက်မှု စသည်
နေပြည်တော် ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သည့် NRPC ကိုယ်စားလှယ် အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန် ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးအား 7Day daily သ တင်းစာအပါအ၀င် မီဒီယာများက တပ်မတော်နှင့် AA တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားမှုအပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ၏ သဘေ
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညောင်ရွာ၌ မီးလောင်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားပြီး အိမ်၈၀ကျော် ဆုံးရှုံး
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအနီး ညောင် ရွာတွင် ယမန်နေ့က မီးလောင်ရာ အိမ်ခြေ ၈၀ ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ ကြောင်း ညောင်ရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူးဦးသန်းဇော်က ပြောသည်။
မိသားစုဝင်ချင်း သတ်ဖြတ်အလောင်းဖျောက်မှု မြို့သစ်မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား
လူသေအလောင်း တွေ့ရာမှစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရာ မိ သားစုဝင်ချင်း စကားများရန်ဖြစ် ကာ လူသတ်အလောင်းဖျောက် ဖျက်သည့်ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ ကြောင်း မြို့သစ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြော သည်။
လူတိုင်းလူတိုင်းတွင် ကိုယ့်ဘဝ တစ်သက်တာ လွှမ်းမိုးခဲ့သော ဖျော်ဖြေရေးသုံး အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါ သည်။
၂၀၁၉ မယ်စကြဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲတွင် အလှမယ် ၂၇ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်
မယ်စကြဝဠာမြန်မာ ၂၀၁၉ ပြိုင်ပွဲတွင် မြို့အသီးသီးက ရွေးချယ်ထားသည့် အလှမယ် ၂၇ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအလှမယ်များကို မတ်လ ၂၁ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ နိုဗိုတယ် ဟိုတယ်၌ စာနယ်ဇင်းများနှင့် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
သီချင်းတွေ ပြန်ဆိုရလို့ အရင်ကလို ရင်ခုန်တယ်ဆိုတဲ့ ကျော်သူစိုး
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် တွင် အိမ်ထောင်ကျနေသဖြင့် ဂီတလောကနှင့် အလှမ်းဝေးခဲ့ကြောင်း အဆိုတော်ကျော်သူစိုး က ပြောသည်။
မွေးနေ့ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်ဝယ်ယူသူများကို စိုင်းစိုင်းပုံပါ AYA Visa ကတ်များ လက်ဆောင်ပေးမည်
အဆိုတော်စိုင်းစိုင်းခမ်း လှိုင်၏အသက်(၄၀)ပြည့်မွေးနေ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွင် လက်မှတ်ဝယ်ယူသူများအား AYA Visa ကတ်များ လက်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
မော်လ်ဒိုဗာနှင်ပွဲမတိုင်မီ အုပ်စုပထမရရန် ရည်မှန်းဟု ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဂ်ဘာပြောကြား
စနေနေ့တွင် မော်လ်ဒိုဗာသို့ သွားရောက်ကစားမည့်ပွဲမတိုင်မီ ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဂ်ဘာ က အုပ်စု (H) ပထမနေရာ ရယူလိုကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယူကရိန်းနှင့်ပွဲတွင် ပေါ်တူဂီ၌ အဓိက ကစားသမားများ ပါဝင်
ယူကရိန်းကို လက်ခံ ကစားမည့်ပေါ်တူဂီအသင်း လူ စာရင်းတွင် ရော်နယ်ဒို၊ ကာဗယ် ဟိုနှင့် ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗား၊ ပီပီ တို့အပါအဝင် အဓိကကစားသ မားအားလုံး ပါဝင်နေပြီး အင်အား အပြည့်ဖြင့် ရင်ဆိုင်မည်ဖြစ် သည်။
မောင်တောတွင် နယ်ခြားစောင့်ရဲတစ်ဦးထံမှ ကျပ်သန်းသုံးထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွဆေးပြားများဖမ်းမိ
မောင်တောမြို့နယ် အင်းဒင်နယ်မြေရဲစခန်းဂိတ်တွင် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲဒုတပ် ကြပ်တစ်ဦးကို ကျပ်သန်းသုံး ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူး သွပ်ဆေးပြားများနှင့်အတူ ဖမ်း ဆီးရမိကြောင်း မောင်တောခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ICOE အစီရင်ခံစာသည် ဇာတ်ကြောင်းအခြေမပြုဘဲ ဖြစ်ရပ်အခြေပြုဖြစ်လာမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီးပြော
ရခုိုင်ပြည်နယ်ဆုိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးကော်မရှင် (ICOE)၏ အစီရင်ခံစာသည် ဇာတ်ကြောင်းအ ခြေပြု မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ရပ်အခြေပြု ဖြစ်လာမည်ဟု ယုံကြည် ကြောင်း ဂျီနီဗာမြို့ ကုလသမဂ္ဂဆုိုင်ရာ အမြဲတမ်းကုိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မုိုးထွန်းက ပြောကြားသည်။
ကချင်နှင့် ရှမ်းစစ်ပြေးဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးများ တရုတ်သတို့သမီးအဖြစ် လူကုန်ကူးခံရနိုင်ခြေ မြင့်မား
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသည့် အမျိုးသမီးငယ်များ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ‘သတို့သမီး’ အဖြစ် လူကုန်ကူးခံရနိုင်သည့် အခြေအနေမြင့်မားနေကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (HRW) က မတ်လ ၂၁ ရက်တွင်ထုတ်ဖော်သတိပေးသည်။
ဟံသာဝတီလေဆိပ် တည်ဆောက်ရေး မြေပြင်ကွင်း ဆင်းတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကျူးကျော် စိုက်ပျိုးသူများကို နောက်ဆုံးအ ကြိမ် သီးနှံနစ်နာကြေးပေးမည် ဟု ပဲခူးတိုင်းအစိုးရက သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
နိုင်ငံခြားပို့ကုန်ဝင်ငွေများ ယူဆောင်လာရန်ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီ ၁၁၀ ကျော်ကို နှစ်လအတွင်း ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ထုတ်ပြန်
ပို့ကုန်ဝင်ငွေများကို ပြည်တွင်းဘဏ်စာရင်းတွင်ထည့် သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီ ၁၁၀ ကျော်ကိုရက် ၆၀ အတွင်း ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ကုန် သွယ်ရေးဦးစီးဌာနက မတ်လ ၁၉ ရက်၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
၂၀၁၈ အတွင်း အီးယူသို့ မြန်မာပို့ကုန်ပမာဏ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်
ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပို့ကုန်ပမာဏသည် ၂၀၁၈ တွင် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂ ရုံးက ထုတ်ပြန်သည်။
အခက်အခဲများကြားက ချန်ပီယံဖြစ်၍ ဂုဏ်ယူကြောင်း MIC ဖူဆယ်အသင်းပိုင်ရှင် ပြော
အခက်အခဲများကြားမှ ဖူဆယ်လိဂ်တွင် တစ်ကျော့ပြန် ချန်ပီယံဖြစ်လာသဖြင့် ဂုဏ်ယူ ကြောင်း MIC အသင်းပိုင်ရှင် ဦး ဖြိုးမောင်မောင်က ပြောသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ ဂျူနီယာ စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ လူရွေးပွဲ ကျင်းပမည်
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ကျင်းပ မည့် အရှေ့တောင်အာရှ ဂျူနီယာ အငယ်တန်း စားပွဲတင်တင်းနစ် ပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု လူငယ်လက်ရွေးစင် ကစားသမားရွေးချယ်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်ရာသီတွင် ရလဒ်များဆိုးရွားနေသည့် ချင်း လန်းအသင်းသည် နည်းပြချုပ်ဦး သာကျော်နှင့်လမ်းခွဲခဲ့ပြီး နည်း ပြဟောင်းဦးဘုန်းနိုင်ကို အစား ထိုးခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ကစားချိန် ပိုမိုရရန် ဂျီရော့ဒ် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ပြန်မည်
နည်းပြသစ် မော်ရီဇီယိုဆာ ရီလက်အောက်တွင် ကစားချိန် နည်းပါးနေ၍ စိတ်ပျက်နေသော ချယ်လ်ဆီးတိုက်စစ်မှူး ဂျီရော့ဒ် သည် ရာသီကုန်၎င်း၏စာချုပ်ကုန် ဆုံးချိန်၌ ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့လိုနေသည်။
ရီးရဲလ်သည် အိပ်မက်အသင်းဖြစ်သော်လည်း မန်ယူတွင် ပျော်နေဟု ပေါ့ဂ်ဘာပြောကြား
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်သည် က စားသမားတိုင်း ကစားချင်သော အိပ်မက်အသင်း ဖြစ်သည်ဟု ပေါ့ဂ်ဘာက ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း မိမိအနေဖြင့် မန်ယူအသင်းတွင် ပျော်ရွှင်နေသည်ဟု ယင်းပြင်သစ် ကွင်းလယ်လူက ပြောကြားသည်။
. မန်ယူကခေါ်ယူရန် စီစဉ်နေသည်ဆိုသော ဘရာဇီးကွင်းလယ်လူ ကော်တင်ဟိုကို ဘာစီလိုနာက ယူရိုသန်း ၈၀ ဖြင့် ရောင်းချရန် ပြင် ဆင်နေစဉ် ၎င်းသည်မန်ယူ (သို့မဟုတ်) ပီအက်စ်ဂျီသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း Goal သတင်းက ဖော်ပြသည်။
ဆားဘီးယားနှင့် သရေပွဲတွင် ဆာနေးကံကောင်းခဲ့ဟု ဂျာမနီနည်းပြပြောကြား
ဂျာမနီနှင့် ဆားဘီး ယားတို့ တစ်ဂိုးစီသရေကျသောပွဲ တွင် ဆားဘီးယားမှ မီလန်ပက် ကော့ဖ်၏ ရက်စက်သောဖျက် ထုတ်မှုခံရသော်လည်း ဒဏ်ရာ ကြီးမားစွာ မရခဲ့သဖြင့် လိုရီဆာ နေး ကံကောင်းခဲ့သည်ဟု ဂျာမနီ နည်းပြချုပ် ဂျိုအာချင်လိုက ပြော သည်။
မန္တလေး စီးပွားရေးဖိုရမ်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားဟုဆို
မန္တလေးမြို့၌ ကျင်းပ မည့် နိုင်ငံတကာထုတ်ကုန် ကုန် စည်ပြပွဲနှင့် စီးပွားရေးဖိုရမ်သို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အပါအ၀င် နိုင်ငံတော်အကြီးအ ကဲများတက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ် ထားကြောင်း မန္တလေးတိုင်းကုန် သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ် ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI) မှ ပွဲစီစဉ်သည့် တာဝန်ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်အမှု ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိဟု ANP ပြော
ဒေါက်တာအေးမောင် ထောင်ဒဏ်အမိန့်ကျခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ အနေဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြကျော်က ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်(၃၀)ပြည့်ပွဲသို့ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များတက်မည်ဟု UWSA မျှော်လင့်
ရထားစက်ခေါင်းအသစ်များ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှု လျာထားကာလထက်စော၍ ပြီးစီး
မြန်မာ့မီးရထားက ရထား စက်ခေါင်းအသစ် ၁၀ခုစလုံးကို လျာထားကာလထက် ဆောလျင်စွာ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ပြီးကြောင်း နေပြည်တော်စက်ခေါင်း စက်ရုံမှူးဦးမြင့်နိုင်ကပြောသည်။ မြန်မာ့မီးရထားက ၂၀၁၈ နှစ်လယ်ကစ၍ တရုတ်ပညာ ရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ စက် ခေါင်းအသစ် ၁၀ လုံး ထုတ်လုပ် တပ်ဆင်မည့် စီမံကိန်းကို အ ကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။